५० रुपैयाँले मिर्गौला बचाउन सकिन्छ ! | पैसाको कुरा
पैसाको कुरा बुधबार, भाद्र ११, २०७६
हामीले खानेकुरा खान्छौँ । खानेकुरा खाएपछि केही शरीरले शक्तिका लागि लिने गर्छ । केही दिसा भएर निस्कन्छ । हामीले खाएको खानेकुराबाट केही बिकार निस्कन्छ । त्यो पदार्थलाई निकाल्ने काम मिर्गौैला अर्थात् किड्नीले गर्छ ।
शरीरमा छिरिसकेका रगतमा पुगिसकेका जति नचाहिएका खाने कुरा छन्, ती काम नलाग्ने र नचाहिने बिकार पदार्थलाई पिसाबमार्फत बाहिर फाल्नु मिर्गौलाको काम हो । जस्तो खानेकुरा सबै शरीरले लिदैन । खाएको औषधि सबै शरीरले लिँदैन । पेय पदार्थ सबै शरीरले लिँदैन ।
शरीरले आफूले चाहिने कुरा लिन्छ । नचाहिने कुरालाई बाहिर फाल्छ । त्यसको सबै काम मृगौलाले गर्छ । यसले आमाशय र आन्द्रामा पुगिसकेको कुरालाई नभई रगतमा पुगिसकेको नचाहिने पदार्थलाई निकालेर फाल्छ ।
हामीले खाने सबै कुरालाई मिर्गौलाले मात्रै रेखदेख गर्छ । यदी खानेकुरामा हामीले लापरबाही गर्दा त्यसको हानी मिर्गौलालाई पर्छ । जसकारण मिर्गौला बिग्रने समस्या हुन्छ ।
किन मिर्गौला बिग्रिरहेको छ ?
खानेकुरामा अहिले विविधता छ । पहिले गाउँघरतिर सबै प्राकृतिक र ताजा हुन्थ्यो । अझ भनाैँ खानेकुरा मात्रै खाइन्थ्यो । नखाने कुरामा त्यति ध्यान जाँदैनथ्यो । तर अहिले विभिन्न किसिमका खानेकुरा खान बानी लागेको छ । केही खानेकुराले शरीरलाई बेफाइदा पुग्छ । जस्तो बोइलर कुखुराको मासु खाँदा त्यहाँ कुनै न कुनै ‘एन्टिबायोटिक’ मिसिएको छ । कुखुरालाई छिटो बढ्ने औषधि लगाउँदा त्यसको असर हामीलाई परिरहेको छ ।
तरकारीमा विषादी मिसिएको छ । छिटो बढाउन रसायन हालिएको छ । किरा नलागोस् भनेर विषादी हालिएको छ । रसायन र विषादीयुक्त खानेकुरा हामीले खान त सजिलै खायौँ । तर त्यो तरकारीबाट शरीरले लिने कुरा र त्यसबाट नचाहिने कुरा बाहिर फाल्न मिर्गौलालाई समस्या परिरहेको छ ।
कुनै दुखाइ भयो । दुखाइ कम गर्ने ‘पेनकिलर’ खायौँ । यसबाट सबैभन्दा धेरै असर मिर्गौलालाई परिररहेको छ । जाँड रक्सी त झन् समस्याको विषय भयो नै ।
हामीले खान हुने र नहुने कुरालाई छुट्याउने अन्तिम अंग भनेकै मिर्गौला हो । जसमा तलमाथि वा हेलचेक्रयाई हुँदा त्यसले पार्ने असर भनेकै मिर्गौलामा हो । हाम्रो मुटुले एकपटक ‘पम्प’ गर्दा निस्कने रगतको २५ प्रतिशत रगत मिर्गौलामा ‘सप्लाइ’ हुन्छ ।
रगत सञ्चार भइरहँदा हामीले राम्रो खानेकुरा खाए सजिलै पच्छ । मिर्गौलाले सजिलै छानेर केही शरीरमा पठाउँछ । अनि केही पिसाबमार्फत बाहिर पठाउँछ । तर जब खान नहुने कुरा खायौ । पानी कम खायौँ । त्यहाँबाट मृगौला बिग्रन सुरु हुन्छ ।
मिर्गौला कसरी बिग्रन्छ ?
मृगौला विभिन्न कारणले बिग्रने हुन्छ । कतिपय कारण हामीलाई थाहा हुन्छ । कतिपय थाहै हुँदैन । तर मिर्गौला बिग्रिरहेको हुन्छ । पहिलो कारण भनेको ‘ब्लोमेरोन नेफ्राइटिज’ भन्ने हुन्छ । जुन मिर्गौलाकै आफ्नो रोग हो । यसलाई जाँच गरिरहेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । नभए सजिलै लक्षण नदेखिन सक्छन् ।
यो किन खतरानाक छ भने मिर्गौला ५० प्रतिशतसम्म बिग्रिसक्दा डाक्टरलाई पनि थाहा हुँदैन । मान्छेलाई त झन थाहा हुने कुरै भएन । झण्डै ७० देखि ८० प्रतिशत मिर्गौला बिग्रिसकेपछि मात्रै मान्छेहरु अस्पताल पुग्छन । जसलाई फेरि स्वस्थ्य बनाएर फर्काउन गाह्रै पर्छ ।
फलाममा खिया लागेपछि प्वाल पर्ने हो । मिर्गौलामा पनि पहिला खिया लाग्छ । खिया लाग्न थालेदेखि नै थाहा पाउनुपर्छ । यसका लागि जचाउँनुको विकल्प छैन । जचाउँदा पिसाबमा प्रोटिन देखिन थालेपछि, पिसाबमा रगत देखिन थालेपछि र ‘क्रिएटिनाइन’ बढ्न थालेपछि नै मिर्गौला बिग्रन लागेको थाहा पाउन सकिन्छ ।
त्यसैले मिर्गौला बिग्रेको थाहा पाउने साधारण उपाय भनेको पिसाब जाँच नै हो । यदी मृगौला बिग्रँदै गएको छ भने पेनकिलर खाँदा, जाँड रक्सी खाँदा, विषादीयुक्त तरकारी खाँदा झन धेरै असर गर्छ । अन्ततः मिर्गाैलाले कामै गर्न छाड्छ । ‘किड्नी ड्यामेज’ हुन्छ ।
अर्को भनेको चिनीरोग, ब्लड प्रेसरलगायत रोगले पनि मिर्गौलालाई सबैभन्दा धेरै असर गर्छ । त्यस्तै ‘अटोइम्युन’ रोगहरु हुन्छन् । जसले मिर्गौला बिगार्छ । तर यीमध्यै सबैभन्दा बढी असर गर्ने भनेको चिनीरोग र ‘ब्लड प्रेसर’ले हो । अहिले डायलाइसिस गराउने बिरामीमध्ये धेरैजसो चिनीरोग र ब्लडप्रेसरका छन् । जसकारण मिर्गौला बिग्रेको छ ।
मिर्गौलाप्रति चरम लापरबाही !
अचेल मानिसहरु मोटरसाइकल चढ्छन् । समय समयमा जाँच गराउँछन् । तर एकपटक पनि आफ्नो मिर्गौला जाँच गराउदैनन् । स्वास्थ्यमा कुनै खराबी आएमा टारेरै बस्छन् । अस्पताल पुग्दैनन् ।
कतिसम्म लापरबाही छ भने जाँच गरायो भने जीवनभर औषधि खानुपर्छ भन्ने भ्रम छ । अरु रोगमा त केही होला । तर मिर्गौला समयमै जाँच गराउँदा धेरै हदसम्म बचाउन सकिन्छ । तर मानिसहरु जाँच नै गराउदैनन । मिर्गौला अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि अस्पताल त पुग्छन् । तर बाँचेर फर्किँदैनन् ।
मिर्गौलाप्रतिको चरम लापरबाहीले गर्दा यो समस्या अचेल धेरै नै दोहोरिरहेको छ । वर्षमा एकपटक ५० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर पिसाब जाँच गराउँदा धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । तर मानिसहरु पिसाब जचाउँन अल्छि गरिरहेका छन् ।
ब्लडप्रेसर, सुगर भएका बिरामीहरु आफूलाई ठिकै छ नि भनेर मिर्गौलाप्रति चरम लापरबाही गरिरहेका छन् । अरुभन्दा ब्लडप्रेसर र सुगरले सबैभन्दा छिटो मिर्गौला ‘ड्यामेज’ गर्छ । तर यसबारे मानिसहरुले बेवास्ता गर्दा नै आज मिर्गौला जाँच गराउन आएका बिरामी घर फर्किन सकेका छैनन् ।
लाखाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर डायलासिस त गराइरहेका छन् । तर मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउने खर्च नभएर मृगौलाका बिरामीहरु अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसप्रति सचेत हुने हो भने धेरै हदसम्म मिर्गौला जोगाउन सकिन्छ ।
मिर्गौला कसरी जोगाउने ?
मिर्गौला जोगाउन पहिला खानपिनमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्याप्त पानी पिउनुपर्छ । अहिले धेरैजसो मानिसहरु अल्छि बनेका छन् । बच्चाहरु स्कुल जाँदा घर अगाडिसम्मै गाडी आउँछ । घरबाट बाहिर निस्कन बच्चालाई दिइँदैन ।
घरभित्र मोबाइलमा गेम खेलेर बसिरहेका छन् । नभए टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका छन् । यसरी ब्यायाम हुँदैन । त्यसैले ब्यायाम पुगेकै छैन । त्यसैले हरेक दिन ब्यायाम गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा दैनिक ३० मिनेट हिड्यो भनेपनि राम्रो व्यायाम मान्न सकिन्छ ।
दिनमा कम्तीमा १ घण्टा आफूलाई समय दिएर स्वास्थ्यको हेरचाह गरियो भने धेरैहदसम्म स्वस्थ्य हुन सघाउँछ । त्यसपछि समय समयमा जाँच गराऔँ । कम्तीमा वर्षमा एकदिन आफ्नो जन्मदिन आउँछ । त्यो दिन आफू कति स्वस्थ्य छु ? एकपटक जाँच गराए सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।
जन्मदिन मनाउनु भनेको एक वर्ष बुढो हुदै जानु हो । यो भनेको शरीरका विभिन्न अंग विस्तारै शक्तिविहीन हुँदै जानु हो । विभिन्न अंगमा रोग लाग्ने जोखिम बढ्नु हो । त्यसैले कम्तीमा जन्मदिनमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन आवश्यक छ ।
अहिले जटिल रोग लागेका व्यक्तिलाई सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सेवा दिन्छ । यो राम्रो हो । तर सरकारले व्यक्तिमा भन्दा समुदायमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।
जस्तो हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी र शिक्षकको हरेक वर्ष मिर्गौला जाँच गराउन आवश्यक छ । हरेक कार्यालय र संघ संस्थामा व्यक्तिको मिर्गौला जाँच गराउन आवश्यक भइसक्यो । यतातिर लगानी आवश्यक छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा जनचेतना हो । जनचेतना फैलाउने भनेर मात्रै भएन । हरेक ठाउँमा मिर्गौला जाँच गरायो भने धेरै बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । त्यसबाट घरको पैसा र समय बचाउन सकिन्छ ।
नागरिकलाई पहिला स्वस्थ्य बनाउन सक्यो भने देश विकास गर्न सजिलो हुन्छ । नभए राज्यलाई झन बढी आर्थिक भार पर्न सक्छ । एउटा क्षमतावान स्वस्थ्य प्रशासक, डाक्टर, इन्जिनियर वा राजनीतिज्ञलाई गुमाउँदा देशलाई कति क्षति गर्छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो छ ।
त्यसैले एउटा नागरिकलाई पनि समय छँदै स्वस्थ्य बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । अभियान चलाउनुपर्छ । व्यक्ति स्वयमले पनि आफ्नो स्वास्थ्य र मिर्गौलालाई माया गर्नुपर्छ । हामीले मिर्गौलालाई माया गर्दा त्यसले हाम्रो जीवन सुन्दर बनाउँछ । यसमा कही कतै ‘कम्प्रोमाइज’ नगराैँ ।(मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पोखरेलसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित)